जीवन शर्मासँग पुस्तक वार्ता : झोलामा पुस्तक बोकेरै हिँड्छु - Naya Patrika
जीवन शर्मासँग पुस्तक वार्ता : झोलामा पुस्तक बोकेरै हिँड्छु
नयाँ पत्रिका काठमाडाैँ | पुष २२, २०७४
मेरो जीवनशैली एकै ठाउँ बस्ने खालको छैन । घुमिरहनुपर्छ । कहिले महोत्सवमा बोलाउँछन् । देशविदेशतिरका कार्यक्रममा गीत गाउन पनि बोलाइरहन्छन् । त्यसकारण एकै ठाउँ बसेर पढ्ने भन्ने छैन । झोलामा एक–दुईवटा पुस्तक बोकेरै हिँड्छु ।
अहिले स्टेफेन हकिङको अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम भन्ने पुस्तक भर्खरै पढिसकेँ ।
पुस्तक छनोट कसरी गर्नुहुन्छ ?
यसरी नै छान्ने भन्ने फर्मुला छैन । कहिलेकाहीँ साथीहरूले गरेको चर्चा सुनेर किन्छु । कहिले आफैँ पसल गएर हेरेर अलि चलेका पुस्तक किनिन्छ ।
पुस्तक किन्ने पसल निश्चित छ कि छैन ?
एउटै मात्र पसलबाट किन्ने भन्ने हुँदैन । कहिले साझामा गएर किन्छु । कहिले बागबजारका पुस्तक पसलबाट किन्छु । साथीभाइले किनेर पढेका पुस्तकबारे चर्चा भयो भने मागेर पनि पढ्छु ।
पढ्ने निश्चित ठाउँ छ ?
मेरो जीवनशैली एकै ठाउँ बस्ने खालको छैन । घुमिरहनुपर्छ । कहिले महोत्सवमा बोलाउँछन् । देशविदेशतिरका कार्यक्रममा गीत गाउन पनि बोलाइरहन्छन् । त्यसकारण एकै ठाउँ बसेर पढ्ने भन्ने छैन । झोलामा एक–दुईवटा पुस्तक बोकेरै हिँड्छु । जहाँ पुग्यो त्यहीँ पढ्छु ।
कुनै पुस्तकले तपाईंको सोच बदलिदिएको छ ?
सोचाइ नै बदलिदिने दुईवटा पुस्तक छन् । ०४२/४३ सालतिर जोसेफ स्टालिनको ‘द्वन्द्वात्मक र ऐतिहासिक भौतिकवाद’ भन्ने पुस्तक पढेको थिएँ । पछि ०४७ सालतिर जीवन र जगत्को विषयमा गहिरो धारणा व्यक्त गर्ने एंगेल्सको पुस्तक ‘डायलसिस अफ नेचर पढेको थिएँ । यी दुवै पुस्तकले मेरो जीवनमा विशेष महत्व राख्छन् ।
तपाईंले पढ्नुभएको पहिलो साहित्यिक पुस्तक याद छ ?
सबभन्दा पहिला लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मुनामदन पढेँ । यो कक्षा ८ तिर हुँदा पढेको थिएँ । पछि म्याक्सिम गोर्कीको आमा, र्याङ मोको युवाहरूको गीतजस्ता उपन्यास पढियो । म यी तीनवटै पुस्तकबाट प्रभावित छु ।
तपाईंलाई याद आइरहने साहित्यको पात्र को हो ?
मुनामदनको मुना र मदन हुन् ।
तपाईंको प्रिय लेखक को हो ?
सबैभन्दा बढी मैले सम्झने लेखक लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नै हुन् । बालकृष्ण सम, पारिजात पनि मलाई मनपर्ने लेखक हुन् । अहिले लेखिरहेकामध्ये नारायण ढकालको लेखनी मनपर्छ । नारायण वाग्लेको पल्पसा क्याफे पनि राम्रो पुस्तक हो ।
युवा हुँदा यौन पुस्तक अथवा उपन्यास पढ्नुभयो ?
एउटा पुस्तक पढेको थिएँ । युधीर थापाको उपन्यास । नाम भने अहिले बिर्सेँ । तर, त्यो यौन उपन्यास नै भने थिएन । अलि रोमान्टिक खालको थियो । त्योबाहेक अरू पढिनँ ।
पुस्तक पढेर रुनु भएको छ ?
पहिला–पहिला त पुस्तक पढ्दा धेरै रुन्थेँ । महाभारतमा दमयन्ती र दुश्यन्तको एउटा दर्दनाक कथा छ । पहिला बाको अगाडि पढ्दै थिएँ । पढ्दापढ्दै रुन थालेँछु, बा खुब हाँस्नुभएको थियो ।
पढ्दापढ्दै झुर लागेर बीचमै छाडिदिनुभएका पुस्तक छन् ?
त्यस्ता धेरै छन् । कतिपय पुस्तक त एक प्याराग्राफ मात्र पढेर पनि छाडेको छु ।
अहिलेसम्म कसैको पुस्तक चोर्नुभएको छ ?
अहिलेसम्म जिन्दगीमा दुईपटक चोरेको छु । मामाको सय रुपैयाँ र आमाको १० रुपैयाँ । त्यसबाहेक कसैको केही चोरेको छैन । पुस्तक पनि चोरेको छैन ।
घरमा पुस्तकालय बनाउनुभएको छ ?
बनाएको छु । एउटा ठूलो दराजमा भरि छन् । बाहिर पनि राखेको छु । पहिला धेरै नै किन्थेँ । अहिले अलि कम किन्छु ।
पुस्तकालयमा कस्ता पुस्तक धेरै छन् ?
माक्र्सका पुस्तक ४० वटाजति छन् । लेनिनका सबै भोल्युम छन् । माओत्सेतुङका पनि छन् । पारिजात र बिपीका पनि सबै पुस्तक छन् । दर्शनशास्त्र, वेदलगायतका पुस्तक छन् ।
तपाईं माक्र्सवादी मान्छे, धार्मिक पुस्तक किन पढ्नुहुन्छ ?
मैले सुरुमा धार्मिक पुस्तकबाट अध्ययन थालेको हुँ । लघुसिद्धान्त, कौमदी, व्याकरणबाट पढ्न थालेको थिएँ । त्यसकारण संस्कृत पुस्तक पनि मसँग धेरै छन् । सबै कुरा पढ्नु र बुझ्नु जरुरी हुन्छ । बाटो कुन अपनाउने हो भन्ने आफैँले निर्णय गर्ने हो । अध्ययनको सीमा साँघुरो बनाउन हुँदैन ।
निम्नवर्गीय मानिसको जीवनदशामा आधारित पुस्तक पढ्न सुझाब दिन्छु । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हेर्ने हो भने गोर्की, लु सुनजस्ता लेखकलाई एकपटक पढेको राम्रो । हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, पारिजातका पुस्तक पढ्नैपर्छ । त्योभन्दा बाहेक विज्ञान र ब्रह्माण्डसम्बन्धी पुस्तक पढ्नुपर्छ । जीवन र जगत् बुझाउने पुस्तक, देशलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने देशभक्तिका पुस्तक पढ्दा राम्रो हुन्छ ।
जीवन शर्मा, जनवादी गायक